Momba ahy | Fifandraisana - Modelarski Świat
Fanamboarana modely ho an'ny rehetra
Maniry ny tontolo Modelarski aho ho toerana sariaka ho an'ny maodely ho an'ny vao manomboka, hanampy azy ireo hahatratra ny bibikely, ary koa ireo mpankafy za-draharaha dia hanana zavatra hotadiavina eto. Ny tranokala no teboka fanombohana an'ireo singa ao amin'ilay orinasa, saingy bilaogy ihany koa izy io. Mamorona torolàlana ho an'ireo modely ho an'ny vao manomboka aho, atiny misy lohahevitra maro mifandraika amin'ny modelina plastika. Eo am-piasana amin'ny tetikasa vaovao dia asehoko ireo atrikasa fanaovana maodely, mandritra izay hahitanao izay teknika ampiasako, ny fomba fandokoana modely, dia ho fantatrao ny tsiambaratelon'ny "fiovan'ny toetr'andro", izany hoe ny fampiharana amin'ny fanahy iniana ny soritry ny akanjo.
Ny anarako dia Michał Wiśniewski ary izaho no mpamorona an'ity tranonkala ity sy ny marika Modellers World. Ny fanaovana modely dia asa iray nandany ahy hatramin'ny fahazazako. Mampivelatra hatrany ny fitiavako aho, izay niteraka ny Modelarski World: tontolo iray ahafahako mampifangaro ny fialamboliko amin'ny fiainako matihanina. Izay laharam-pahamehana ny kalitao ary ny fialan-tsiny no tsy olana.
Asehoy ny maodelinao!
Na angamba te-hampiseho ny sanganasao ianao, hahafantatra ny hevitry ny hafa na hangataka fotsiny ny torohevitr'ireo mpiara-miasa efa za-draharaha? Aza hadino ny mitsidika ny vondrona Modelarski Świat - mpankafy modely sy mpamantatra toetr'andro ao amin'ny Facebook.
Ahoana ny fomba hijanonana ho vaovao?
Ny Modeling World dia mamaly - vonona ihany koa amin'ny takelaka sy finday smartphone - azonao atao ny mizaha ara-dalàna izay tianao. Toy ny pejy eo Facebook, ao no hahitanao ny vaovao farany momba ny famoahana ary hahafahanao mitazona vaovao tsy tapaka amin'ny tontolon'ny maodely. Raha manana piraofilina ianao ao Instagram na Google+, hampahafantarina anao any koa. Aza hadino ny mijery ilay fantsona Youtube.
Rohy mifandraika amin'ireo tranokala voalaza etsy ambony eo amin'ny zorony ambony havanan'ny tranokala na eo amin'ny farany ambany amin'ny tranokala raha mijery azy amin'ny fitaovana finday ianao.